RAILROAD STORIES – Pann Satt Lann Books
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားရထားလမ်းပေါ်မှာ စစ်အတွင်းတုန်းက ဂျပန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချပ်သင်း၊ ဘုံချောင်း၊ နမ်းခမ်း၊ မဲဇာ၊ အင်းတော်၊ နဘား၊ ပင်ဝဲ၊မော်လူး၊ နမ်းခွင်၊ မိုးညှင်း၊ မိုးကောင်း . . . လမ်းပိုင်းတွေတစ်လျှောက်မှာ နှစ်ဖက်စစ်သားတွေ ထောင်/သောင်းချီပြီး တိုက်ပွဲကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်က မကျွတ်မလွတ်သေးသူတွေနဲ့ လူဝင်စားတွေရဲ့ အကြောင်းပေါင်းများစွာ ဒဏ္ဏာရီပေါင်းများစွာဟာ ယနေ့ထိ သံလမ်းတလျှောက်က အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်များစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ စစ်သမိုင်းများ အခင်းအကျင်းပေါင်းများစွာဟာလည်း ၂၀၀၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ သမိုင်းပြန်လည်တူးဆွသူတွေ၊ ဂျပန်တပ်မှ ကျန်ရစ်သူ အဆက်အနွယ်တွေရဲ့ ဖော်ထုတ်မှုတွေကြောင့် ယနေ့မှာတော့ ပြန်လည်ထင်ရှားလာပါတယ်။
သမိုင်းပုံရိပ်တွေနဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန် အတိတ်ဘဝကို ခင်တွယ်နေတဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ ထိတွေ့မိလိုက်တဲ့အကြောင်းကို စာရေးသူက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကြားက ဒဏ္ဏာရီဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် ပုံဖော်ထားပါတယ် . . . .
5.6 x 0.6 x 8.2 inches
အိမ်မက်အသစ်စာပေ ၊ 2020 ဒီဇင်ဘာလ (ပ-ကြိမ်)
“RAILROAD STORIES” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply